बेलायतमा नयाँ वर्ष उल्लास- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
वैशाख २, २०७५ नवीन पोखरेल
लन्डन — सात समुद्रपार भए पनि बेलायतका नेपालीले आफ्नो मन मस्तिष्कमा मातृभूमि बिर्सेका छैनन् । नेपाली कला संस्कृति, वेशभूषा र चाडपर्वलाई जीवन्तता दिन उनीहरूको सक्रियता स्वदेशभन्दा कम छैन यहाँ । लाग्छ, बेलायतमै बनेको छ मिनी नेपाल ।
बायाँबाट क्रमश: मिसेस नेपाल यूके २०१७ का फस्ट रनरअप अमृता गिरी गजुरेल, क्याटवाक अवार्ड विजेता गीता बस्नेत पाण्डे र फोटोजेनिक अवार्ड विजेता प्रिमा भट्टराई पन्त । तस्बिर : रघु पाण्डे
नेपाली मेला, पशुपतिनाथ मन्दिर र गुम्बा निर्माण, विभिन्न सांस्कृतिक पर्व मनाइनु यसका उदाहरण हुन् ।
नेपाली पात्रो फेरिन लाग्दा बेलायतको नेपाली डायस्पोरा पनि नयाँ वर्ष स्वागत लागि सँधै उत्साहित हुन्छ । नयाँ वर्ष २०७५ कै अवसर पार्दै नेपालीको अत्यधिक बसोबास भएका सहरमा विविध कार्यक्रम तय गरिएका छन् । सबैभन्दा बढी नेपाली बस्ने रसमोर बरोलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था ग्रेटर रसमोर नेपाली कम्युनिटीले नेपाली नयाँ वर्ष भव्य रूपमा मनायो । शनिबार अल्डरसटस्थित एम्पायर हलमा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाली र ब्रिटिस समुदाय लगायत
इन्डियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकनसमेतको सहभागिता रह्यो ।
कार्यक्रमकै लागि गत फेब्रुअरी ६ देखि स्थानीय नेपाली युवायुवती तथा बालबालिकालाई हरेक सोमबार र बुधबार साँझ नृत्य एवं गायनको तालिम गराइएको थियो । ६ वटा नृत्यसहित यसको दीक्षान्त नयाँ वर्षकै दिन गरियो र कार्यक्रममा नेपाली तथा अंग्रेजी गीत, थप ३ वटा प्रोफेसनल नृत्य, प्रथम नौमती बाजा गुल्मी यूके र नेपालबाट आएका कलाकारको समेत बेजोड प्रस्तुति दिएको कार्यक्रम संयोजक वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामधन राईले बताए ।
कार्यक्रम गर्नुको मुख्य उद्देश्य स्थानीय समुदायसँग सामीप्य एवं आपसमा सकारात्मक दृष्टिकोण अभिवृद्धि र वर्तमान परिवेशमा स्थानीय काउन्सिल, प्रहरी र प्रशासनसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न भएको कम्युनिटी अध्यक्ष जीव बेल्बासेले बताए । स्थानीय काउन्सिलले नेपाली नयाँ वर्षलाई आफ्नो क्यालेन्डरमा समावेश गरेपछि विगत वर्षभन्दा यो पटक फरक समुदायका उल्लेख्य मानिसको सहभागिता रहेको दाबी गर्‍यो । कार्यक्रममा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी, स्थानीय मेयर, मेयरेस, क्याबिनेट लिडर, डेपुटी क्याबिनेट लिडर, आर्मी कर्णेल, प्रहरी, रसमोर फायर एन्ड रेस्क्यु सर्भिसेजका म्यानेजर, रसमोर बरो काउन्सिलका कम्युनिटी डेभलप्मेन्ट म्यानेजर, रसमोर भोलेन्टरी सर्भिसेजका चिफ एक्जुकेटिभ, १५ जना काउन्सिलर, विभिन्न नेपाली र स्थानीय संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रह्यो ।
उता, साउथहल विश्व हिन्दु मन्दिरमा नयाँ वर्ष वसन्त उत्सव तथा धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न भयो । बेलायतस्थित पश्चिम लन्डन पण्डित समूहले नयाँ वर्षकै अवसर पारेर शनिबार कार्यक्रम गरेको हो । उक्त समारोहमा सत्यनारायण पूजा, व्रतकथा, ग्रहशान्ति तथा भजनकीर्तन र १६ वर्षमुनिका बालबालिकाको धार्मिक चित्रकला प्रदर्शन समेत गरिएको थियो । पश्चिम लन्डन पण्डित समूहका पं. चिरञ्जीवी ढकालका अनुसार पण्डितहरूले हालै श्री पशुपतिनाथ सनातन मन्दिर दर्ता गरी निकट भविष्यमा हिन्दु मन्दिर निर्माण गर्ने योजनासमेत योजना बनाएका छन् ।
त्यस अलवा रोयल बरो अफ ग्रिनविच नेपलिज सोसाइटीले पनि आइतबारका लागि प्लमस्टिडमा ‘नयाँ वर्ष शुभकामना साँझ’ राखेको छ भने नेपलिज कम्युनिटी अक्सफोर्डसायरले शनिबारै ‘नयाँ वर्ष पार्टी’ गर्‍यो । अक्सफोर्डसायरको कार्यक्रममा कम्युनिटी अवार्ड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ककटेल डान्स लगायतको प्रस्तुति थियो ।
संस्थागतदेखि व्यक्तिगत तवरमा अन्य कार्यक्रम पनि तय छन् । यहाँका युवाहरूले नयाँ वर्षमा नयाँ संकल्पका साथ अघि बढ्ने अठोट लिएका छन् । बेलायतमा पहिलो पटक गत वर्ष गरिएको मिसेस नेपाल यूके २०१७ विजेतामध्ये सेकेन्ड रनरअप अमृता गिरी गजुरेल, क्याटवाक उपाधि विजेता गीता बस्नेत पाण्डे र फोटो जेनिक टाइटल जितेकी प्रिमा भट्टराई पन्तले पनि नयाँ बर्षलाई आ–आफ्नै संकल्प साथ मनाएका छन् । बेलायतको नेपाली समुदायमा पछिल्लो पटक अधिकांश कार्यक्रममा नृत्य प्रस्तुत गरेर चर्चा बटुलिरहेका यी श्रीमती सुन्दरीहरूले २०७५ सालमा सामाजिक र स्वयं सेवालाई मुख्य प्राथमिकता दिने संकल्प गरेका हुन् । अंग्रेजहरूको देश भए पनि नेपालीपन र पर्व कहिल्यै भुल्न नहुने बताउँछन् उनीहरू । केही साता अघिमात्र मिसेस नेपाल यूके टिमले नेपालमा मस्तिष्काघात भएका बालबालिकाको सहयोगार्थ एक च्यारिटी डिनर गरेर करिब दस लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो ।
प्रकाशित : वैशाख २, २०७५ ०८:३६
श्रीदेवीलाई मरणोपरान्त नेसनल अवार्ड
काठमाडौँ — दुबईमा भएको असामयिक निधनको डेढ महिनापछि बलिउड अभिनेत्री श्रीदेवीले ६५ औं नेसनल फिल्म अवार्ड जितेकी छन् । उनलाई फिल्म ‘मोंम’ का लागि उक्त अवार्ड दिने भएको हो ।
‘मोंम’ मा श्रीदेवीले पाकिस्तानी नायिका सेजल अलीको सौतेनी आमाको भूमिका निर्वाह गरेकी छन् । जसमा उनी सौतेनी छोरीको बलात्कारीसँग बदला लिन्छिन् । करिअरमा झन्डै तीन सय फिल्ममा अभिनय गरेकी श्रीदेवीको यो नै पहिलो नेसनल अवार्ड हो ।
‘न्युटन’ लाई यस वर्षको उत्कृष्ट हिन्दी फिल्मतर्फको नेसनल अवार्ड दिँदा अभिनेताको अवार्ड भने रिद्धि सेनले बंगाली फिल्म ‘नगरकीर्तन’ बाट हत्याए । कतिपयले उक्त अवार्ड ‘न्युटन’ कै राजकुमार रावले पाउन सक्ने अनुमान लगाएका थिए । बरु उक्त फिल्मका अर्का अभिनेता पंकज त्रिपाठीले स्पेसल अवार्ड पाए । शुक्रबार घोषणा गरिएको विजेताको नामावलीमा ‘बाहुबली २’ ले द्वन्द्व निर्देशन र पपुलर फिल्मको अवार्ड जितेको छ । हिन्दी फिल्मभन्दा क्षेत्रीय फिल्मको वर्चस्व रहेको नेसनल अवार्डको विजयी सूचीमा असमिया फिल्म ‘भिलेज रकस्टार’ समेत उत्कृष्ट फिल्म बनेको छ । उत्कृष्ट निर्देशकको नेशनल अवार्ड मलयाली फिल्म ‘भयानकम’ का जयराजलाई दिइने भएको छ । सहअभिनेत्रीतर्फ ‘इरादा’ फिल्मकी दिव्या दत्ताले जित्दा दादा साहेब फाल्के अवार्ड भने विनोद खन्नालाई दिने निर्णय गरिएको छ । एआर रहमानलाई ‘मोम’ को ब्याकग्राउन्ड म्युजिक र ‘कात्रु भेलिऐदे’ का लागि उत्कृष्ट संगीतकारको दुई नेसनल अवार्ड मिलेको छ । जुरी अवार्ड ‘नगरकीर्तन’ लाई दिइएको छ ।
प्रकाशित : वैशाख २, २०७५ ०८:३४